Iwo masisitimu ekuhwina pa roulette
Maitiro ekuhwina pa roulette aripo, kunyangwe kana iwo anonyatsoshanda ari maviri kana matatu uye zvirokwazvo nhasi anonetsa kwazvo kushandisa mukasino.
Ini ndatonyora imwe nezvekuhwina roulette masystem chinyorwa izvo zvandinokukoka iwe kuti uverenge kana iwe uchida kunzwisisa uyu musoro zvirinani.
Sezvaunenge uchiverenga mune iyo posvo ►masystem ekuhwina pa roulette inoshanda chaizvo, Pakati pedzishoma dzakabudirira nzira dzeroulette imwe inoshanda kwazvo munguva yakapfuura ndiyo yaisanganisira kutamba pa kusasarura roulette.
Izvo zvakagara zvichidzidziswa kuti hapana roulette vhiri rinogadzikana zvakakwana uye nekudaro nekufamba kwenguva vese vanogona kunge vari pasi pekukanganisa mune mamwe matunhu kana mamwe mabhokisi.
Nhoroondo ye roulette izere nemaantecdotes nezvevatambi vakawana izvi zvikanganiso uye vakabudirira kuvashandisa kuti vawane kuhwina kukuru.
Zvimwe zvezviitiko zvine mukurumbira ndezvemakanika wechiChirungu wezana ramakore rechiXNUMX anonzi Joseph Jagger, iyo yakakunda muMonte Carlo yakaenzana neinenge madhora mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvenguva.
Vadzidzi vaviri vekoreji, Al Hibbs e Roy Walford, mukupera kwema40 vakahwina madhora zviuru makumi maviri nezvishanu paCasino Reno uye vakapotsa vaita mukurumbira wenyika.
Pakati pa1986 na1989, mutambi anozivikanwa wepamusoro anodanwa anonzi Billy Walters akakunda kudarika $ 4 mamirioni muAtlantic City!
Iyi yakave mibairo inoshamisa uye zvechokwadi inofanirwa nemukurumbira wavakagadzira, uye yega yeaya mabhenefiti aida basa rakakura rekugadzirira.
Iwo akasiyana zvikwata zvewachi akapedza mavhiki achinyora mhedzisiro yezvipineti pane gumi nemaviri emahara emahara ekutsvaga kuremara mumuviri; qKana chakakanganisika chakazowanikwa, mutambi akagara pasi patafura ndokubheja nhamba dzakarerekera Maawa makumi maviri nemana pa24, kusvikira tarisiro yekukunda yasvika, kana kusvika manejimendi manejimendi akamisa mutambo.
Kubva kupera kwevashandisi vemakumi masere makumi masere vatanga kufarira zvakanyanya kutadza kweiyo roulette, zvisati zvaitika mavhiri mazhinji aive neakanyanya mabhatani akapatsanura, yakatarwa semunhu zvikamu uye izvi zvechokwadi zvakabatsira zvakawanda mukugadzira izvo zvakashata.
Pakati pa1989 na1991, makasino mazhinji akachinja ekare maroulette mavhiri, achiatsiva nemamwe matsva yakaderera chimiro mono zvikamu: mhedzisiro ndeyekuti nhasi ndizvo zvinenge zvisingaite tsvaga kana kushandisa roulette isina kugadzikana.
Mukupedzisa? Mutambo pamabheji akasarudzika mumakasinasi mazhinji nhasi haugone, zvisinei chokwadi chinosara chekuti kupfeka (izvo zvisingaregedze ma roulettes epamhepo) kunoenderera kuchikanganisa roulette nekufamba kwenguva, ndosaka ndakaona software bot kungoongorora online roulette h 24, yakagadzirirwa bvisa hurema painongotanga kuoneka.
Ini ndinouya nekukurumidza kumubvunzo wekupedzisira: asi nhasi kune online yakasarudzika roulette? Kunyangwe kana echizvino-chimwe chinhu-roulettes chisingambobvumiri iwe kuti uwane kuhwina kukuru kwekare, vanogona kunge vaine zvidiki zvipfeko zvekupfeka, zvehuremu hwakaganhurirwa, asi zvakakwana kuita purofiti yakanaka. Zvirokwazvo haugone kutarisira kuita zvekupamba chaiko senge izvo, semuenzaniso, veSpanish ► Gonzalo García Pelayo akatungamira kuEurope nemhuri yake mukutanga kwema90.
Gonzalo Garcia Pelayo. Mufananidzo: Jose Ramon Ladra.
Rekodhi mugadziri uye anofarira masvomhu, Gonzalo García Pelayo ane mukurumbira mukurumbira kune muhombe muhombe waakaita achitamba roulette mumakasino pasi rese, mushure mekugadzira. nzira yepamutemo kuhwina, zvichibva pakuongorora kwehuwandu hwedhirowa, kuitira kuti uone nhamba dzandinoda, nekuda kwekukanganisa kweroulette.
Maitiro acho aive akavakirwa pachokwadi chekuti roulette matafura zvine zvazvisingabvumirwe ane michina kusakwana uye kuti izvi ivo vanogadzira maitiro izvo zvinoita kuti dzimwe nhamba dzive neinoburitsa frequency yakakwirira kupfuura iyo dzidziso.
Mushure mekutora mhedzisiro yezviuru zviuru zvemazana uye kuisa dhata ravo mune software yakagadzirirwa izvi, Pelayo akaona kuti kasino roulette muMadrid yaifarira dzimwe nhamba, dzaive dzakakodzera kubheja.
Achizvironga pamwe nedzimwe nhengo dzemhuri yake, akatanga kutamba paCasino Gran Madrid kubva pakupera kwa1991, achikwanisa kuhwina muzhizha ra1992 chimwe chakaita 70 mamirioni peseta mukasino chete!
Sisitimu yake yaive yakapusa: akatamba chete uye chete nhamba dzaifungidzirwa kuva dzinodiwa, asinganetse kuvanza zano rake.
Vatariri veMadrid kasino, vanofungira nzira dzekukunda, vakatanga kutevera mafambiro ake zvakanyanya kusvika, mushure mekukunda kwakapetwa mazana mashanu ezviuru pazuva rimwe chete, vakarambidza Pelayo nenhengo dzemhuri yake kuti vapinde. .
Nhengo dzemhuri yePelayo saka dzinotanga kufamba kunotamba mumakasino akasiyana siyana pasirese: Las Vegas, Australia, Austria, Denmark, Holland.
Pakazara, iyo García Pelayo mhuri inofungidzirwa kuti yakawana pamusoro pe250 mamirioni pesetas (1,5 mamirioni euros nhasi), kunyange hazvo huwandu hwese husati hwamboratidzwa.
Mhosva yake yakavewo makore gumi emutemo kuSpain.
Muna 2004 Dare Repamusorosoro reSpain rakadzokera kumhuri yePelayo kodzero yekupinda chero kasino muSpain kubva kwayakamborambidzwa.
Kurudziro yemutongo uyu yaive yekuti "haigone kutsanangurwa sekubiridzira, kana mutambi akasapindira munzira ipi neipi yekukonzeresa mhedzisiro yemutambo".
Iyo nyaya yaGonzalo García Pelayo uye mhuri yake yaivewo nyaya yebhuku ► Iyo Yakanaka Nhau yeLos Pelayos uye chinyorwa cheBreaking Vegas ► Roulette kurwisa.
Director Eduard Cortés akatungamira iyo firimu muna 2012 ► VaPelayos, zvakasununguka zvichibva pazviitiko chaizvo zvakasangana nemhuri yeSpain.
Maitiro ekuona akasarudzika roulette
Hausati warara here iwe? Zvakanaka, nekuti izvozvi ini ndiri kuzokuudza iwe nezve iyo pfungwa iyo iyo bot yakavakirwa Roulette Bias Sniper.
Basa rakaitwa naPelayo muma 90s raive rakanakisa, pakupedzisira mumwe munhu akakwanisa kushandisa hunyanzvi hwavo hwemasvomhu nekombuta kuti anyatso kuwana purofiti hombe ku roulette uye ini ndinogona kungoyemura Pelayo nezve izvo zvaakagadzira nekuvaka, asi pamusoro pezvose kumutenda nekuve zvakasununguka zvakagovana chikamu chedzidziso che nzira yake online
Kana iwe ukaita imwe tsvagurudzo pamambure haufanire kuve nekuomerwa kukuru kuwana izvo zvakafanana zvemukati izvo zvandakadudzira kubva kuChirungu uye izvo ini zvandinotaura pazasi kutanga kutanga musoro wenyaya zvakadzama.
Pelayo nzira yekutanga
Kuti tiwane chinokanganisa (tsvete) ye roulette, sezvo tisina iyo kuti tiite zviyero zvinodiwa panyama, isu tinofanirwa kuendanhamba yekuongorora yemaitiro ake.
Izvo zvakakosha kuti tizive kana roulette iine hunhu "hunotsauka" kubva pane izvo zvatinofanira kutarisira kumuchina wakakwana uye, kuti tiite izvi chinangwa, isu tinofanirwa kutanga taongorora kuti roulette yakakwana uye isina gwara inozvibata sei (Random Wheel).
Nechinangwa ichi Pelayo akagadzira iyo pfungwa ye "kunaka": Kana makumi matatu nematanhatu apeta nhamba ikauya kamwe chete, hatizove neakanaka kana asina kunaka kukosha mumari yedu, kureva kuti, tinenge tichienzana, kana ikabuda kaviri, tichava neyakajeka (+36), kana ikabuda katatu, tichava nezvakanaka zviviri (+1), nezvimwe. kana ikasashanda zvachose, saka tine zvakaipa (-2).
Ndokumbira utarise: iyi kuverenga zvinoenderana nekubhadharwa chaiko kwenhamba, kwete pairi average average frequency, iyo yatinoziva kuve kamwe chete makumi matatu neshanu.
Ndechipi kukosha kwakanaka kunogona kuwanikwa nenhamba mushure meimwe nhamba yezvipineti mune isina gwara roulette vhiri? Kana, ndeipi miganho yekusarongeka?
Pelayo akagadzira software yekutamba mutambo wakasarudzika wakasarudzika, ndiko kuti, pasina chero roulette zvikanganiso, uye akafananidza mamirioni easina kuruka.
Kubva mukufungidzira akaona kuti aivada angangoita zviuru zviviri zvekufananidza zveboka rega rega renhamba inofungidzirwa, kuwedzera aya mapoka panguva dzinoverengeka dzeanosvika zana panguva.
Semuenzaniso, kune chiuru chinotenderera chinotenderera, chakagadzirisa huwandu hwemamiriyoni maviri ezviuru uye chakadaro kune yega yega spin block. Ngatitarisei zvakanaka pamatafura anotevera:
Kana isu tikaongorora yekutanga boka remazana matatu, tinoona kuti huwandu hwe "positives" (hunokoshesa kupfuura mwero unotarisirwa pamiyero ye36 spins), mune vhiri risina kuremara, iri paavhareji ingangoita +37 (yechipiri chena churu).
Uku ndiko kufunga kuri nyore kwekutevera: ese mazana matatu ekuruka, nhamba yega yega inofanirwa kubuda kanokwana 300/300 = 8,33 times kutitendera kuti titombopaza kunyange nemari.
Izvi zvinoreva kuti huwandu hwakakungurudzwa kasere huchaita kuti tirasikirwe zvishoma uye idzo dzakakomberedzwa ka8 dzinoita kuti tihwine chimwe chinhu.
Kana nhamba yakatenderedzwa ka14, zviri pachena kuti ine kukosha kwakaringana zvakaenzana ne14 - 8,33 = 5,67 yatichatenderedza +5.
Ngatitii mushure memazana matatu ekuruka mamiriro mamwechetewo akaitika kune mamwe manhamba matanhatu, saka tichava nezvenhamba yakakwana yetafura yakaenzana ne: 300 + 6 + 5,67 + 5,67 + 5,67 + 5,67, 5,67+ 5,67 = 39,69.
Sezvo pasina imwe nhamba yakauya kanopfuura ka9, ngatitii patafura iyi, mushure memazana mazana matatu, tine mari yakaenzana + 39.
Kubva patafura tinogona kuona kuti tafura iri zvishoma pamusoro pemutero unotarisirwa wetafura isina kuremara (isina kujairika vhiri), ndiko kuti + 37, asi chero zvakadaro kukosha uku kuri kure ne "Muganho Wakapfava”Icho chiri muchirongwa, chetatu che 300 spins, iri + 46 (yekutanga chena ikholamu).
Chii chinonzi "Muganho Wakapfava"? Iyo ndiyo yakanyanya kunaka kukosha Hazvina kusvika muna 95% yezviuru zviviri zvekufananidza zveboka rega rega rekutenderera.
Izvo chete zvasara zvishanu% zveyedzo zvakapfuura uyu muganho, saka tinogona kutaura kuti zvinonetsa kukunda iyo Yakapfava Limit, nekuti mumavhiri asina kuremara zvinongoitika chete 5% yenguva (ka5 kamwe muna makumi maviri).
Chii chinonzi "Zvakaoma Limit"? Iyo ndiyo yakanyanya kunaka kukosha yakasvikwa kamwe chete panguva yemamirioni zviuru zviviri zvebhuru rimwe nerimwe. Izvi zvinotevera kuti mukana weizvi zvichiitika ingori 2.000% (0,05 nguva muna 1) uye ndizvo kukosha kwakakodzera kwatinofanira kutsvaga.
Muenzaniso wetafura yapfuura, iine kukosha kwayo kwakanaka +39, haitaridze chero chakasarudzika nezve roulette iyi; dzimwe nhamba dzakangobuda kupfuura dzimwe, asi kwete zvakanyanya kukwana.
Zvingave zvainakidza dai huwandu hwenhamba dzakange hwave +50, sekukunda iyo Yakapfava Limit (+46), zvingadai zvakaita kuti tifunge kuti tafura yaienda nenzira kwayo.
Chishamiso chaicho chingadai chakave semuenzaniso, dai kukosha kwacho kwanga kuri +64, izvo zvaizonyatsoratidza kuvepo kwetafura nekutsauka kwakasimba, uko kunotibvumidza kuve nechokwadi chekuwana.
Pakuyedza mazana matatu emadhirowa, Pelayo haana kufunga nezve mukana wekuti angangosangana nemhando idzi, se iwe unoda zvakawanda zvakawanda kutenderera yehuwandu hwakavimbika, zvichipiwa kuti tafura yepamusoro yakambowanikwa (tichaidaidza kuti "A"), Iine mazana matatu chete maspineti yakanga yasvika pakukosha kwakanaka kwakaenzana ne + 300 chete.
Ngatitorei zororo mumufananidzo wedu kuti tinzwisise zviri nani kuti "tafura" chii.A","B"Kana kuti"C"(Yechitatu / yechina / yechishanu machena machena etafura).
Rongedza yakasarudzika Roulette
Kana isu takarekodha zvakakwana data (kanenge Zviuru zvinomwe), yakaunganidzwa kubva pane zvatiri nechokwadi yakagara iri tafura imwe chete, nekutarisa tafura yapfuura tichaona kuti iyo yepakati yakanaka kukosha yeiyo roulette isina kuremara mushure me5.000 spins iri pamusoro pe109; kana kukosha kwacho kukapfuura +143 (Muganho Wakapfava) takatarisana nechinhu chinonakidza uye kana kukosha kwacho kukapfuura + 192 (Zvakaoma Limit), isu tiri pamberi pemugodhi chaiwo!
Izvi ndizvo zvinoitika pamberi pe "A", Iyo panguva ino inopedza kusahadzika kwese, yapfuura iyo'Yakaomarara Limit, pane kumwe kuvepo kwekukanganisa (kusarura).
Muchokwadi, isu tine zvinopfuura 99,95% mukana wekuti nhamba dzakanaka dzicharamba dzichiwedzera kutsauka kwavo kubva pane yakajairwa.
Mazhinji ematafura eroulette akadhirowewa panguva yekuferefetwa kwaPelayo aive erudzi "B", aine mutengo wakanaka we + 153 (zvekare pamuenzaniso we5.000 spins), nepo yakaipisisa (asi ichiri kubatsira) uye iine "zvishoma" zvikanganiso zvavakasvika pa kukosha kwe135, nguva dzose padyo neSoft Limit values ​​(+143).
Pelayo akatanga kurwisa apo tafura yakapfuura iyo Yakapfava Muganhu, ndichine imwe 95% chokwadi kuti tafura yakarerekera.
Iine iyi data Pelayo akafunga kuti zvaive zvakakodzera kuisa pangozi 5% yenguva yekukanganisa, sekunge wapfuura iyo Yakapfava Limit, kamwe chete mu1 tafura haina kutsauka yakananga ku'Yakaomeswa Limit, kupfuura ipapo, hazvigoneke kuti iyo chaiyo kukosha kuti idzokere kuSoft Limit: hapana vhiri rinopfuura iro'Zvakaoma Limit dzoka!
Kana iyo roulette, mushure mekupfuura iyo Yakapfava Muganho ikadzoka (1 nguva kubva makumi maviri sezvatakataura), isu tinongomira kubheja patafura iyoyo uye mune chero zvazvingava chero kurasikirwa kuchabhadharwa zvakakwana nedzimwe nguva dzese umo izvi zvisingaitike .
Kana isu takanyoresa zviuru gumi zvekutenderera kubva patafura (kunyoresa kunogona kuitika panguva dzakasiyana dzemaawa akasiyana kana mazuva, asi isu tinofanirwa kugara tiri 10.000% yechokwadi kuti iyo yakakandwa yakanyoreswa patafura imwechete, pasina chero chinhu chinotsiviwa, saka isu tinofanirwa cherekedza chero chinhu chemuviri - kukwenya, kusakwana - izvo zvinotivimbisa nezve izvi), isu tine chokwadi chakajeka pane izvo zvarinogona kutipa.
Kunyangwe iine zvikanganiso zvishoma (tafura yerudzi "C"), kuti irwiswe pamwe nemari, zvachose inofanira kunge yakapfuura iyo Yakapfava Limit uye ndasvika kanokwana +195 (kukosha kunoreva zviuru gumi zvipembenene).
Kana iyo isina kusvika pamitengo iyi, zviri nani kukanganwa nezve iyo tafura, sezvo isina mukana wekutipa.
Kana tafura isina chainopomerwa (Avhareji Random Wheel) inosvika uye inodarika 30.000 spins, yakajairwa avhareji uye Yakapfava Limit, kutanga kudzikira uye kudzika uku kunosungirwa kuenderera mberi kusvika apo, mushure mezviuru zvemakumi emaoko akaongororwa, hapazovi nenhamba dzine hunhu hwakanaka, kuve nemukana wemba kwakabvisa chero mhedzisiro yekutsauka kwakanaka kubva pane yakatarwa kukosha kukosha kwetafura isina chaikosha.
Asi kana tafura iine chero chakakanganisa, dzimwe nhamba dzinoenda kupfuura zvakajairwa tsika uye kuramba uchidaro.
Kunyangwe mhando "C" tafura inopfuura iyo'Yakaomarara Limit, uchiri kuvimbisa purofiti yakachengeteka.
Kana iyo tafura iri mhando "A", mushure memakumi matatu ezviuru spins ichave yasvika ku stratospheric yakanaka sum ye + 966, izvo zvisingaite kunyoresa patafura isina chakakanganisika, ine muganho wakanyanya mukusarongeka kwakazara + 294.
Kana zvisati zvanyatsojeka, kukosha + 966 kwakaenzana nekuwana mubairo wemakumi mapfumbamwe nematanhatu ekubhadharwa kwemauniti makumi matatu nemasere, ita kuwanda uye uone kuti zvakaenzana zvakadii maererano nemari yekubhadharira pasina kufambira mberi kunodiwa.
Pelayo zano rekubheja pane yakasarudzika Roulette
Kana isu tawana roulette iyo yadarika iyo'Yakaomarara Limit, maitiro ekutevera ari nyore: iwe unofanirwa kubheja nhamba dzese dzakanaka.
Kana chete iwo Muganho Wakapfava wapfuurwa, isu tinongofanirwa kubheja pane iwo manhamba asvika pakukosha kukosha +8, kuitira kuti udzivise manyepo enzvimbo akagadzirwa nemukana wakachena.
Chidzidzo chetsika dzeroulette dzine hurema hushoma kana hwakajeka (Tafura dzerudzi "A", "B" uye "C"), yakaitwa nemidziyo yemakomputa yakaburitsa hunhu hwakafanana chaizvo newematafura chaiwo, nenzira iyi Pelayo neake mhuri (akavadaidza kuti "submarines" pavakapinda mumahoro kuti varekode zvabuditswa) vakakwanisa kufungidzira mwero unokwanisika webhenefiti unowanikwa kubva kumaroulettes akaongororwa.
Semuenzaniso, uchifunga chiuru chemazino, tafura yerudzi "A" inofanira kuburitsa yakaenzana nenhamba makumi matatu dzakazara, yetafura yerudzi "B" madonhwe ekubhadharira kusvika makumi maviri azere, nepo tafura yerudzi "C" paavhareji inovimbisa a purofiti mambure akaenzana nekukunda gumi nemaviri izere.
Zvichienderana nehunhu uhwu, Pelayo akashanda fungidziro yekukunda inosvika makumi manomwe emamiriyoni pesetas, iyo yakasimbiswa nezviitiko chaizvo zvakaitika paCasino de Madrid munguva yezhizha ra70.
Zvakanaka, mushure meye dzidziso ngatipfuurire mberi kunodzidzira: neiri online roulette software ini ndaida kugadzira chishandiso icho, kutanga kubva kune imwechete pfungwa yakabudirira kugamuchirwa naPelayo, yaizotora nhevedzano yezviyero zviri nani zvinoenderana nemazuva ano mutambo wepamhepo.
Chekutanga pane zvese, ngatitsanangure ipapo izvo iri bot, ndiko kuti, chirongwa chinozvibheja, saka haufanire kunyora manyorero zviuru nezviuru zvezvipikiri; dai Pelayo aive neiyi tekinoroji uye pamhepo makasinasi aripo makore makumi maviri apfuura, pamwe angadai akave bhirionea.
Chimbofunga nezvemitengo yekufamba yemhuri yese, maawa akapedzwa kurekodha maspinco incognito, kushushikana kwekubheja patafura yakazara nevanhu mukupera kwesvondo, muchidimbu, rakanga risiri basa risingabhadharwe, asi raitova basa. .
Kubva panguva ino yekutarisa bot ndiye mubatsiri akakwana, parizvino iwe unogona kuwana maratidziro eroulette bots mazuva ese mumavhidhiyo paYouTube, kwaunogona kuona mienzaniso yeakanakisa zvirongwa, dambudziko nderekuti, zvisinei, kazhinji uye kazhinji ndinovhura mavhidhiyo kwandinoona bots vanobhejera software roulettes, idzo netsananguro hadzisi roulettes chaidzo, asi tevera pfungwa dzemuchina wekubhejera.
Kana iwe usina kuhwina sisitimu, bhoti rinongoshanda kuti rishandure kurasikirwa, kana pane kupokana iwe uine kuhwina system, bhoti ndiyo yakanaka chishandiso, nekuti haina mari yekumaneja, haina kuneta, haina kuvhunduka, haifanirwe kumbopinda muchimbuzi, inoramba iine ruzha uye isina tsitsi kunyangwe patinenge takarara tichifara.
Munofunga sei Roulette Bias Sniper (Bet uropi)
Iyo yekubheja nzira yakavakirwa panenge zvachose paPelayo nzira yekutanga, pane iyo ini ndinovimba hapana kusahadzika panguva ino kuti iri chaiyo 100% nzira yekukunda; saka nei pasi achichinja?
Chaizvoizvo, nguva nenguva uye ini ndinofunga: asi kana iyi nzira yekukunda yakatsanangurwa zvakadzama online pamakore, nei pasina munhu akavaka bot pamberi? Nei ndichiramba ndichiona online bots chete inotamba zvakapetwa pa software roulette kana iyo inoedza kufanotaura maitiro ayo akasarudzika neimwe yekufungidzira algorithm? Zvingave here kuti chero munhu akazviita anozvichengeta (nenzira kwayo) chete ivo vega? Kana kuti zvine masvomhu zvine chokwadi here kuti ese online roulette haigone kuverekera?
Ini ndinokuudza maonero angu pamusoro penyaya iyi: kusasarura pamhepo maRoulettes aripo, chete kuti nenzira yekugadzira yakagamuchirwa nhasi (chinhu chimwe chete), zvinotora nguva yakareba kusati kuremara (kunyangwe kushoma) kuchizviratidza, uyezve kana roulette isiri chakaremara, kunyangwe kurerekera kudiki kwetafura kwakakwanira kuburitsa anomaly mune kuwanda kwenhamba.
Kechipiri, pamhepo makasino anoongororawo zvinobuda pamaroulettes avo uye naivowo vanoona kana paine chakakanganisika, asi panguva ino vane mikana miviri: chero vangachinja chikamu chisina kukwana nemari inodhura (nekuti kana vari chinhu chimwe chete, iyo ' mhete yekuparadzanisa uye kwete chete bhokisi rimwe chete), kana ivo hapana chavanoita, zvirinani kudzamara vaona kuti mumwe munhu ari kuhwina zvinopfuura izvo zvaizovadhurira kuti vashandure chinhu chakaremara. Chii chawaizoita iwe panzvimbo yekambani?
Pakati pezvinhu zviviri izvi pane nguva yakanyatsotsanangurwa, inova nguva inopfuura kubva pakarerekera roulette, kusvika apo mutengesi anozviona.
Munguva ino zvinokwana Roulette Bias Sniper, sekune mashoma asi akanyanya shanduko andakaita kune Pelayo dzidziso yekutanga, anoedza kuona izvo zvisipo (zvishoma kana zviri pachena) uye nekukurumidza otanga kuyedza kubatsirwa kubva kwavari kune mutambi, kunyangwe kana achinge achishanda, akarara kana kuita zvese zvimwe pane kutarira pahwindo nebhora rinotenderera.
Online yekutevera sarudzo ne Roulette Bias Sniper
Ini ndoda kukurumidza kukuvimbisa iwe nezve chinhu chimwe chete: kushandisa iyi roulette bot iri nyore kwazvo.
Yambiro! kubva mushanduro 8 Roulette Bias Sniper inoshandisa iyo nyowani graphic yekuziva injini Screen Capture Engine inogona kurodha mahara pane izvi ► batanidzo. Saka iwe uchafanirwa kushandisa ese ari maviri software panguva imwe chete.
Sezvatakambotaura ipapozano rekutanga ndere iro rinotsanangurwa naPelayo uye mune ino positi ndicharatidza chete iwo maficha makuru yeiyo chirongwa, yekumisikidza uye yakatsanangurwa tsananguro yemitambo sarudzo yandinosarudza ita mavhidhiyo chaiwo wozvitsikisa pa ► Youtube chiteshi di ThatsLuck, Saka ini ndinokuraira iwe kuti unyore uye nekumisikidza zviziviso kana iwe uchida kugara uine ruzivo nezve izvo zvinyorwa zvichatevera zvechokwadi.
Main Sarudzo dze Roulette Bias Sniper
► Kunyoresa otomatiki enhamba dzinobuda.
► Kuchengetedza otomatiki kwema spins mune zvinyorwa faira (zvinonyanya kubatsira kana PC ikaparara, pakarepo simba kukundikana, nezvimwewo).
► Kubvira kwe dzima otomatiki iyo pc painosvika pane imwe Mira Kukunda kana imwe Stop Loss.
► Mano ekumisikidza iyo bot kumberi kuitira kuti iwe ugone kuchengeta kasino hwindo yakazara skrini (gara pamusoro).
► Kugona kuisa hwindo rekasino kumberi kuitira kuti irege kumbofukidzwa nemapopu kana zvimwe zvekushambadzira zvekasino.
► Kubvira kwekuita ridza ruzha inogadziriswa neyese yekukunda spin.
► Mano ekuona iyo bot mumodi Mini, ndiko kuti, hwindo rebhoti rakaderedzwa pakukwirira chero kudiwa kwekumira pane zvidiki zvidiki.
► Kugona kusarudza mushure mangani ma spins akarekodha kuverenga kwenhamba dzakanaka uye chero mabheti anofanira kutanga (semuenzaniso matafura aPelayo anotanga kubva pamakumi matatu emipendero zvichienda mberi).
► Kugona kusarudza kuti mangani zviyero nenhamba bheji.
► Mano ekushandisa iyo bot kungo rekodha maspins pasina kana kumbonongedzera (zvinobatsira kune avo vanoshandisa dzimwe nzira uye vachida kugadzira matura ezvimwe zvinangwa), nekuti izvi zvinokwana kuisa '0' mumunda wezvikwata zvinonongedzwa nenhamba imwe chete.
► Kugona kuseta iyo chaiyo kukosha kweiyo manhamba kuti ave kubheja: iyo yekutanga nzira inofungidzira kubheja manhamba ane akanaka kukosha kana. +8 kana iwe ukapfuura iyo Yakapfava Limit uye ese akanaka manhamba kana iwe ukapfuura pakaoma Muganhu.
► Sarudzo Bet Shield: kuchengetedza winnings dzako kana iyo Soft Limit yapfuura (nekuti mu5% yezviitiko kukosha kwacho kunogona kudonha), unogona kuseta mwero uyo, kana iyo PV + yetafura ikatanga kudzikira (inogara yakasara pamusoro peSoft Limit), iyo bot zvakadaro, anomira kubheja. Kuti uite izvi bot inorekodha yakakwira PV yetafura (PVMax) painenge ichikura uye ichienzanisa iyo neSoft Limit uye iyo PV + kukosha. Muvhidhiyo yeYouTube ini ndichatsanangura iyi sarudzo yakakosha mune zvakadzama.
► Mano ekuona kugoverwa kwemabheti pane roulette uye a chati chekutarisa, Nechiratidzo chehuwandu hwehuwandu (Kusasarura Prob%) yekuvapo chaiko kwekusarudzika kwakaverengerwa pahwaro hwehuwandu hwenhamba dzakakundwa maererano neuwandu hwenhamba kubheja pamupendero.
Dzimwe Sarudzo dze Roulette Bias Sniper
► Kubhejera anti Log-Off: iwo mabheti ekubheja chimwe chete base base pane tsvuku uye imwe pane nhema (saka iwe unongorasikirwa chete kana zero yakatenderedzwa) yega tot spin kana pasina chaiko kubhejera kuita. Izvi zvinodzivirira kubviswa kubva patafura yemutambo, kunyangwe kana ichigadzira mutengo wakaderera wekunyoresa (verenga pazasi kuti ungaverengerwa sei). Seimwe nzira yekubheja iyo shoma pane tsvuku uye nhema, iwe unogona zvakare kubheja neimwe nzira zvisingaite chete pane tsvuku kana chete pane nhema; mukufamba kwenguva mutengo wakangofanana (zvirokwazvo, unonyatso ponesa mashoma maeuro), asi zvirinani kasino haina kunzwisisa kuti manhamba ari kunyorwa zvakajeka.
► Kuenzanisa chirongwa (chekubvunza) pakati pekuverenga kunoitwa ne bot uye tafura yekutanga yakatsanangurwa naPelayo. Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zve Roulette Bias Sniper ndeyekuti kuverenga uye kuenzanisa iyo Yakapfava Limit neiyo Yakakodzera Kukosha kwetafura, inoita 2.000 yakasarudzika simulation pane yega yega spin, nenzira iyi iwe une mamiriro ekudzora mune ese chikamu chemutambo uye kwete mumablock e500 spins sezvazvinoitika nematafura ePelayo kana iwe uchinge wadarika zviuru zvishanu. Mune tafura yechirongwa (Kutsvetera Referensi Tafura) Ini ndaisa Slight Bias (nyoro kusarura) ikholamu iyo inonyatsoenderana netafura yePelayo ine chekuita ne Nyora "C" (verenga chikamu chekutanga cheiyo posvo yeruzivo).
Mumufananidzo pazasi iwe unogona kuona kuti isu tiri pamazana chiuru nemazana mashanu akarekodhwa maspinhi (madhiragi egirini anoenderera mberi nekufamba kwenguva), aine yakanaka Tafura kukosha kwe1.500 uye Slim Limit inogadzirwa nebhoti re +73, rakafanana chaizvo neiro raPelayo rekutanga tafura (Runyoro Runyoro mukoramu yechipiri mutafura) iri +92. Zviripachena zviri pachena kuti hakuna (zvakadaro) mamiriro ekubheja pane iri vhiri.
► Kutumira e-mail ine mushumo wakadzama pane iyo VP + danho retafura, cashier, nezvimwe. Iyi sarudzo iri nyore inokutendera kuti ugamuchire e-mail (kunyangwe pa smartphone yako Naizvozvo) maminetsi mashoma kana maawa, zvekuti kunyangwe usipo pamba kana kuita chimwe chinhu, iwe unogona kugara uchitarisa mamiriro ekunyoreswa uye marejista emari. Izvo zvinoita zvakare kukumbira e-mail meseji kuti itumirwe iyo PC isati yadzimwa (ShutDown sarudzo) paunosvika iyo Stop Win kana Stop Loss yakaiswa mune huru mutambo wepaneru.
► Kuchengeta Mutengo Calculator: zvingatibhadharise zvakadii kunyoresa zviuru zvinomwe zvemazana nema Roulette Bias Sniper kune roulette vhiri uko kushomeka kubheja pane tsvuku / nhema kuri masendi makumi maviri? Nekuda kwesarudzo iyi iwe unozogona kuve neruzivo rwemitengo yekutarisira kunyoreswa. Ingo pinda iyo yepasi kubheja muminda, yega yega mangani ma spins pasina kubheja iyo bot inofanirwa kubheja pane yakatsvuka / nhema (nguva yekubheja) uye huwandu hwezvipenga zvauri kuronga kunyoresa. Wobva wadzvanya pane bhatani Calc isu tichava nemhedzisiro, ino mune ino kesi ichave yakatenderedza 15 euros.
►01. Mangani manhamba ekubheja Roulette Bias Sniper pese paitenderera? Zvinoenderana, kana iyo Yakapfava Limit yapfuura, iyo bot inotanga kubheja ese manhamba ane PV + kukosha mukuru kupfuura masere kana kuti iwe sarudza (mutemo wePelayo ndewe +8). Mune bvunzo dzakaitwa kusvika parizvino, iyo bot yakarova kusvika kunomwe nhamba pasipiniti. Zviripachena kana iyo Yakaomeswa Muganhu yakapfuudzwa (chokwadi kusarura) ivo vanobheja manhamba ese ane PV + akakura kupfuura 0 (kureva zvese zvakanaka) izvo zvinogona kana kuva gumi nematatu kana gumi nemana.
►02. Ndeipi bankroll inofanirwa kuve nemutambi? Pane izvi ini ndinovimba nezviratidziro zvakajeka zvePelayo iye pachake: zviyero chiuru ndizvo zvidiki zvekutarisana nezvikamu zvekusiyana kwakashata kunyangwe mune iko chaiko kwekusarura. Izvi zvinoreva kuti kana tafura iri shoma yenhamba imwe iri 0,20 unogona zvakare kutanga ne kutanga capital ye € 200. Kana iyo bankroll yasvika € 400 unoenderera kumberi kubhejera 2 mauniti e0,20 pakazara (masendi makumi mana) zvichingodaro kuenda kumusoro.
Tafura yandakanyoreswa yakapfuura iyo Yakapfava Limit, asi mushure memazana mashoma spins iyo PV + kukosha kwakadzokera pane zvakajairwa, nei? Kana iwe waverenga iyo yekutanga chikamu cheiyo positi zvakanyatsonaka, iwe uchave waona kuti Pelayo iye akataura kuti tafura isina chakashata inogona kudarika iyo Yakapfava Limit mu5% yezviitiko. Nekudaro, kana kukosha kwacho kuchidonha pazasi peMuganhu Wakanyorova, zvinoreva kuti chero zvakadaro pave paine chikamu chemasimba akasimba enhamba dzenhamba, chikamu icho nematanho akaiswa mubot (Bet Shield sarudzo), vanogona kuramba vachitungamira purofiti yakanaka kwazvo kune mutambi.
►04 - mangani masvikiro andinofanira kunyora kuti ndinzwisise kana paine rusarura kana kwete? Dai wango 7.000, ipapo kana iwe ukatarisa patafura Kutsvetera Referensi Tafura iwe unozoona kuti ndaisa dot tsvuku chaipo pa7.000 spins. Izvi zvinodaro nekuti pa7.000 inoruka kukosha kweSoft Limit uye iyo Slight Bias (kuderera zvishoma) zvinowirirana (+160), saka kana pasina kana "kuderera" kukoshesa PV + kukosha kwetafura kunosara pazasi pechikumbaridzo ichi, Zvikasadaro pa7.000 spins inofanirwa kunge ichitanga kukwira pamusoro peSoft Limit (ona kukosha kweanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu emipinha, iko kukosha kweSlight Bias kunotanga kukwira zvisingadzoreke zvichienzaniswa neSoft Limit).
Ini ndinogona kushandisa Roulette Bias Sniper pane otomatiki mweya-inofambiswa ma roulettes? Chaizvoizvo kwete, iwe zvechokwadi ucharasikirwa. Izvo zvakakosha zvinodiwa ndezvekuti kune munhu anokanda bhora, nekudaro rambidza iwo emanyepo maroulette mavhiri panenge paine mhando yemuratidziri wekutsanangura mutambo, asi bhora richiri kutanga roga kana nekudzvanya zvisinganzwisisike mabhatani.
►06.Ndinogona here kukwidza bheji rangu ndichitamba kana ndiri kuhwina? Unogona, asi usadaro. Kunyangwe iwe uri kuhwina nekubheja 1 € pa nhamba uye kunyangwe iyo roulette yakanyatsosarudzika, inogona kutanga mutsauko wakashata sekubvisa mari yese, wobva wawedzera chokwadi chekuti VP + yetafura inowira pasi peSoft. Limit nekuti iwe uri mu5% yezviitiko zvataurwa pamusoro (zvichaitika) uye kukuvara kwacho hakugadzirisike! Iyo yakakodzera bheji kukosha inofanirwa kunge yakaenzana neiyo bankroll yakakamurwa ne1.000 (ona FAQ n. 2)
Ini ndinogona kushandisa bot iyi pane inopfuura imwe pc? Ehe, kana iwe uine PC inopfuura imwe pamba, unogona kuzviita nyore, zvirokwazvo ndinokurudzira kuti umhanye iyo zvakananga kubva kukiyi USB, saka kana zvichidikanwa iwe unoiisa zvichibva nePC ipi yaunoda kushandisa kana maitiro aunofunga gadzirisa ako epamhepo ekuongorora zviteshi.
►08.Kubhejera kunoitika sei? Panguva yekuwanda kana nekufambira mberi? Nguva dzose uye chete pahukuru hwakaenzana. Kana paine imwe bhenefiti, kunyangwe huremu ndiyo mhinduro isinganetsi (Pelayo zvakare yakaridzwa seizvi), kunyangwe kana nekufamba kwenguva iwe unogona kuwedzera kukosha kweiyo yekubheja unit (ona FAQ n.2 uye n.6).
►09 Maitiro ekugadzirisa Roulette Bias Sniper? Zvakaoma kuishandisa here? Kuti unzwisise mashandiro anoita bot, zvakakwana kuti unzwisise nzira yekutanga yaPelayo yakatsanangurwa pakutanga kwenyaya, kana uchinge wadzidza kuti zvichave nyore kwazvo kunzwisisa zvimwe zvese. Pa ►Youtube chiteshi di ThatsLuck iwe unowana yakatarwa vhidhiyo yeinotora injini setup ►Screen Capture Engine uye yakatarwa yekushandisa Roulette Bias Sniper.
► 10. Ko iyo bot inoshanda pane ese ma online kasino Chikamu chinonyengera chehurongwa chaiicho chaicho chekuona huwandu hwakaburitswa pachiratidziri. Muvhidhiyo pane setup ini ndichatsanangura zvese, zvisinei iyo bot yekutenda kune nyowani ►Screen Capture Engine inoona izvo zvainoona pachiratidziro uye haina kubatana neimwe nzira nekodhi yechirongwa yemapeji ewebhu webasino. Kune rimwe divi, izvi zvinoreva kuti iyo yekutanga setup inosemesa (inongoitwa kamwe chete pam kasino), asi kune rimwe divi kasino haigone kuvharidzira kuteedzera, ndanga ndichishandisa nzira iyi kubvira 2012 ndisina kumbove nedambudziko.
►11 Asi izvi bhoti zvinonyatso kuhwina pa roulette? Kana roulette iine kunyangwe kusarudzika kwechokwadi HONGU 100%, zvikasadaro iwe unorasikirwa nemari yakaiswa mari kuti utore ma spins (tarisa Yekutevera Mari Calculator sarudzo). Ikozve kune mamiriro ezvinhu apo roulette inorekodha zvingangoita kurerekera nekuda kwesimba rakasimba reimwe nhamba, mune ino kesi iwe unogona zvakare kuwana kukunda kwakanaka, chakakosha chinhu kunzwisisa panguva iyo kutsauka kwenhamba kuri kudzoka nekumira (StopWin) kuhwina kusati kwaneta (chinhu chinotarisirwa na Bet Shield sarudzo).
►12 .Mumavhidhiyo eYouTube ndakaona kuti vavakidzani vehuwandu hwebheji vanobuda kazhinji, zvinoita here kubheja pane iwowo? Kwete, nekuti kana paine chaicho kusarudzika, roulette inongotanga kuburitsa mawinnings pane chaiwo manhamba, mamwe acho anozobuda neakajairika mafambiro, pasina kuunza isu chero mukana mukufamba kwenguva.
►13 Pane zano rakakurudzirwa here? Ehezve, kana iwe usiri kuda kutora chero mikana, iwe unogona kuita izvi: investa chaiyo chiyero kunyoresa 7.000 spins. Kana izvi zvangoitwa, iwe unenge uine imwe pfungwa yekuti roulette yakarerekera here kana kwete uye iwe unogona pakupedzisira kutanga kubheja. Kuti uite izvi, ingoisa iyo kukosha "0" mumunda Bheji Zvikwata uye mirira nemoyo murefu kusvika kumagumo ekunyoresa, ayo anogona zvakare kutora nzvimbo pamazuva akati wandei, sekureba sekunge roulette iri yakafanana nguva dzose. Kana, pachinzvimbo, iwe ukasarudza chiito, siya kukosha "1" mumunda weBheji Units uye tarisa mamiriro ezvinhu munzira yakanangana ne7.000 spins, zvinomboitika kutanga kubheja kare mushure memazana mashoma ekurota kana iyo PV + yetafura inopfuura iyo Yakapfava Muganhu.
►14 Unowana sei Roulette Bias Sniper? Unogona kudhawunirodha software ipapo ipapo kubva pahungano pazasi. Paunenge iwe waona mavhidhiyo pane iyo Youtube chiteshi uye ukadzidza zvese zvakakosha mabasa, unogona kutenga iro bhuku kuAmazon, maunowana iyo activation kodhi.
Zvakanaka, usati watora pasi Roulette Bias Sniper kubva pane iyi link iripazasi, yeuka iyi imwe yekuona chishandiso chemutambo weiyo roulette uye nekudaro, kuti ishandise kugona kwayo kusvika padanho, inofanirwa kunzwisiswa zvizere mukushanda kwayo, kunyangwe kana zvadaro ingobaya kuti uite.